ईश्वर एउटै छन् वा अरु पनि, यदि हामीले यस बारेमा शिक्षाको ज्योतिबाट चिन्तन मनन् गर्ने हो भने सबै कुराहरु पारदर्शी हुन जान्छ । यसलाई बुझ्नको लागि मैले प्रश्न र उत्तरको सहयोग लिएको छु ।
प्रश्न नं.१– इस्लामको ईश्वरीय धारणा र अरु धर्मावलम्बीहरुको ईश्वरीय धारणामा के अन्तर छ ?
उत्तरः इस्लामको आस्था तौहिद (एकेश्वरवाद) माथि छ । यसको अर्थ ईश्वर एउटै छन्,उनीबाहेक अरु कोही पुज्य छैन । अरु धर्ममा एकभन्दा बढी ईश्वर मान्ने आस्था रहेको छ र उनीहरु त्यसको पुजा पनि गर्छन् । यदि हामीले मूर्तिपूजा गर्नेहरुसँग यस ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता को हुन् भनेर प्रश्न गर्यौं भने सबैको बेग्ला–बेग्लै उत्तर हुनेछ र आफैमा यती विरोधाभाष हुन्छ कि एकले अर्काको कुरा मान्दैन । जबकि कुरआनले यो भन्छ कि यस ब्रह्माण्ड र मानवको सृष्टिकर्ता, अन्नदाता एवं जगदाता सबै एउटै छन् । यी कुराहरु तलका यी आयतहरुबाट प्रष्ट हुन्छ–
“उनै (अल्लाह) हुन् जसले तिम्रोलागि धर्तीका सम्पूर्ण (वस्तुहरू) सृष्टि गरे अनि आकाशतिर फर्की सटीक तथा सन्तुलित सातवटा आकाश निर्माण गरे र उनी नै सम्पूर्ण चिजका ज्ञाता हुन् ।” (कुरआन २ः२९)
“अल्लाह आकाशहरू एवं धर्तीका सृष्टिकर्ता हुन् । र, जब उनले कुनै कार्यको निर्णय गर्छन् तब ‘होओस्’ मात्र भनेर त्यसको आदेश दिएपछि त्यो हुन पुग्छ ।” (कुरआन २ः११७)
“उनले नै आकाशहरू तथा धर्तीलाई सत्यको आधारमा सृष्टि गरे । उनी यिनीहरूले गर्ने शिर्कभन्दा उच्च छन् ।” (कुरआन १६ः३)
ईश्वर एउटै छन् जसको प्रमाणको लागि कुरआनमा धेरै तर्कहरु छन् । तर के धेरै ईश्वरहरु मान्नेहरुसँग कुनै यस्तो किताब वा प्रमाणहरु छन् ? छैन र कदापी छैन ।
यिनीहरुको जुन प्रमाण छ त्यसलाई कुरआन यसरी व्यक्त गर्दछ,“के हामीले यिनीहरुलाई यस अघि कुनै ग्रन्थ दिएका थियौँ जसलाई यिनीहरुले दृढतासाथ समातेका छन् ? होइन, बरु यिनीहरु भन्छन् हामीले आफ्ना पूर्वजहरुलाई यसै मार्गमा पाएका छौ र हामी पनि तिनीहरुकै पदचिन्हमा हिँड्दछौँ ।” (कुरआन ४३ः२१–२२)
मूर्तिपूजा गर्नेहरुसँग एउटा मात्र प्रमाण छ कि हाम्रो पुर्खा र पूर्वजहरुले यसको पूजा आराधना गर्दै आएका छन् । तर उनीहरुको यो कथन सत्य होइन । किनभने यदि हामीले आजभन्दा दुईहजार वर्ष पुरानो इतिहासको पाना पल्टायौं भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि २००० वर्ष पहिला जुन मूर्तिको पूजा हुन्थ्यो त्यो अहिले छैन,र आज जसको पूजा गरिन्छ त्यतिखेर थिएन । दिन प्रतिदिन नयाँ–नयाँ ईश्वरहरुको उत्पत्ति भइरहेको छ । खासगरी मूर्तिपूजा गर्नेहरुको आस्था अनुसार कतिपय मूर्तीहरु यस्ता छन् जसको पूजा गर्न छाडेपछि त्यसको मन्दिर पनि सुनसान भएकोछ ।
यदि हामीले अनेकेश्वरवादीहरुको आस्थालाई हेर्यों भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरुको अनेकेश्वरवादी आस्था पनि बलियो छैन । यसलाई बुझ्नको लागि कुनै अनेकेश्वरवादीलाई नास्तिकहरुसँग ईश्वरसम्बन्धि कुरा गर्न लगाउँदा उसले आफ्नो कुराको शुरुवात यसरी गर्नेछ– पृथ्वीलाई कसले बनायो ? आकाशलाई कसले सृजना गर्यो ? ताराहरुलाई कसले बनायो ? जनावर र मानिसहरुको अन्नदाता को हो ? यिनीहरुको हेरचाह कसले गर्छ ?यी सबै प्रश्नहरुको उत्तरमा ईश्वरको बारेमा बुझाउनको लागि कुनै यस्तो ठूलो शक्ति रहेको छ जसले यी सबै कार्यहरु गरिरहेका छन् भनेर भन्छन् । उसले नास्तिकसँग कदापी यो भन्ने छैन कि यी सारा कार्यहरु गर्ने कुनै दुई–चारवटा शक्तिहरु रहेका छन् । अनेकेश्वरवादीहरुले जुन प्रश्न नास्तिकहरुसँग गर्छन् त्यही प्रश्न कुनै एकेश्वरवादीले ती अनेकेश्वरवादीसँग गर्यो भने उनीहरुको जुन उत्तर आउँछ त्यसलाई कुरआनले यसरी व्यक्त गर्दछ, “भनिदेऊ तिमीहरूलाई आकाश तथा पृथ्वीबाट कसले खाद्यान्न प्रदान गर्छ ? कान तथा आँखाहरूमाथि कसको अधिकार रहेको छ ? कसले निर्जीवबाट सजीव तथा सजीवबाट निर्जीवलाई सृजना गर्छ र कसले संसारका कार्यहरू सञ्चालन गर्छ ?” तिनीहरूले तुरून्तै भन्नेछन्– ‘अल्लाहले !’ अनि सोध,“त्यसो भए तिमीहरू किन डराउँदैनौ ?”(कुरआन १०ः३१)
अल्लाहले मुहम्मद (स.) लाई अनेकेश्वरवादीहरुसँग यी प्रश्नहरु सोध्न उपदेश दिएका छन् । आजभन्दा १४३८ वर्ष पहिले अनेकेश्वरवादीहरुले पनि यसको जवाफ दिन सकेनन् र आजका अनेकेश्वरवादीहरु पनि दिन सक्दैनन् । अनेकेश्वरवादीहरुलाई पनि यदि अहिलेको जीवनमा पनि कुनै कष्ट वा दुःख आयो वा कसैले उसमाथि दुव्र्यवहार गर्यो भने उसको मुखबाट आउने शब्द एउटा मात्र हुन्छ– “ईश्वर त एउटै छन् र उनले नै हिसाब लिनेछन्” । उनीहरुले कदापी यस्तो भन्ने छैनन् कि ईश्वर दुई–चारवटा छन् र उनीहरुले हिसाब लिनेछन्। उनीहरुको यस कथनलाई पनि कुरआनले यसरी व्यक्त गरेको छ,“र जब हामी मानवमाथि कृपा गर्छाैं तब ऊ मुख फर्काएर एकातिर हिँड्छ र जब उसमाथि संकट आई लाग्छ तब ऊ लामो–लामो प्रार्थना गर्न थाल्छ ।” (कुरआन ४१ः५१)
एउटा आश्चर्यजनक कुरो यो हो कि अनेकेश्वरवादीले पनि एउटै ईश्वरलाई मान्ने गर्छ तर पूजा–आराधना चाहिँ धेरै देवीदेवताहरुको गर्छ । संसारका सबै धर्मावलम्बीहरुको यहि आस्था रहेको छ । जबकि इस्लाम धर्म एउटा मात्र यस्तो धर्म हो जसको आस्था र कर्ममा कुनै विरोधाभाष छैन । संसारको जुनसुकै भागको मुस्लिम होस्, चाहे ऊ शहरको होस् वा गाउँको, हिमाली होस् वा पहाडका चट्टान–बासी, यदि तपाई उनीहरुसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ कि तपाई कतिवटा ईश्वरहरुलाई मान्नुहुन्छ ? उनीहरुको नाम के–के होे भने सबैको उत्तर एउटा मात्र हुन्छ । जसलाई कुरआनले यसरी प्रष्ट पारेको छ– “के तिमीहरू याकुबको मृत्युको बेला उपस्थित थियौ जब उनले आफ्ना सन्तानहरूलाई सोधेका थिए– “तिमीहरूले मेरो मृत्युपश्चात् कसको उपासना गर्नेछौ ?” तिनीहरूले भने– “हामी तपाईका ईश्वर र तपाईका पूर्वजहरू इब्राहीम, इस्माईल एवं इस्हाकका ईश्वरको उपासना गर्नेछौँ जो एकमात्र ईश्वर हुन् । र, हामी उनैका आज्ञाकारी हौँ ।” (कुरआन २ः१३३)
“र तिमीहरुका ईश्वर एउटै हुन् । उनीबाहेक कोही उपास्य छैन । उनी अत्यन्त करुणामय एवं परम दयालु छन् ।” (कुरआन २ः१६३)
“अल्लाह– उनीबाहेक कोही उपास्य छैन; जीवन्त एवम् चिरस्थायी छन् । उनलाई न उंघ लाग्छ न निन्द्रा नै । आकाशहरू तथा पृथ्वीका सम्पूर्ण वस्तुहरू उनैका हुन् । को छ जसले उनीकहाँ उनको अनुमती बिना सिफारिश गर्न सकोस् ? उनी तिनीहरूका अगाडि र पछाडिका सबै कुरा जान्दछन् । र, तिनीहरूले अल्लाहको ज्ञानको कुनै पनि अंश अल्लाहले नचाहेसम्म प्राप्त गर्न सक्दैनन् । उनको प्रभुत्व आकाशहरू तथा पृथ्वी सबैमाथि छ । तिनीहरूको संरक्षणले उनलाई थकित तुल्याउँदैन र उनी उच्च तथा महान् छन् ।” (कुरआन २ः२५५)
“हे अह्ले किताबहरू हो ! आफ्नो धर्ममा सिमाभन्दा बढी नबढ । अल्लाहको बारेमा नितान्त सत्यबाहेक केही नभन । मर्यम–पुत्र ईसा मसीह केवल अल्लाहका रसूल एवं उनका वाणी हुन् जसलाई उनले मर्यमतर्फ पठाए र उनी अल्लाहको तर्फबाट एउटा ‘आत्मा’ हुन् । अतः अल्लाह एवं उनका रसूलहरूमाथि ईमान ल्याऊ । र, (अल्लाह) तीन छन् नभन; यस कुरालाई त्याग । तिमीहरूकालागि यही राम्रो हुनेछ । अल्लाह नै एकमात्र पूज्य हुन् । कोही उनको छोरा छन् भन्ने कुराबाट उनी पवित्र छन् । जेजति आकाशहरू एवं धर्तीमा छन् सबै उनकै हुन् । र, कार्यसाधकको रूपमा अल्लाह नै पर्याप्त छन् ।” (कुरआन ४ः१७१)
“निस्सन्देह तिनीहरूले कुफ्र गरे जसले यो भने कि अल्लाह तीनमध्ये तेस्रो हुन् जबकि एक अल्लाहबाहेक अरू कोही उपास्य छैन । यदि यिनीहरूले आफ्ना कुराहरूलाई त्यागेनन् भने यिनीहरूमध्ये जो कुफ्रमा कायम रहे तिनीहरुकालागि दुखःदायी यातना रहेको छ ।” (कुरआन ५ः७३)
“सोध ! सबभन्दा ठूलो साक्षी को हो ? भनिदेऊ– ‘अल्लाह’, (जो) म र तिमीहरूका बीच साक्षी रहेका छन् । र, यो कुरआन मतर्फ यसकारणले अवतरित गरिएको हो कि तिमीहरूलाई तथा जसकहाँ यो पुग्छ तिनीहरूलाई सचेत गरूँ । के वास्तवमा तिमी यो साक्षी दिन सक्छौ कि अल्लाहसँग कुनै अन्य पूज्यहरू पनि छन् ?” भनिदेऊ– “म यसको साक्षी दिन सक्दिन । पूज्य त उनी मात्र हुन् । र, मेरो त्यसमा कुनै सरोकार छैन जसलाई तीमीहरू साझेदार बनाउँछौ ।” (कुरआन ६ः१९)
“र, हामीले आदतर्फ उनका भाइ ‘हूद’ लाई पठायौँ । उनले भने– “हे मेरा जातिवन्धुहरू हो ! अल्लाहको उपासना गर । उनीबाहेक तिमीहरूको कोही उपास्य छैन । के तिमीहरू डराउँदैनौ’ ?” (कुरआन ७ः६५)
“तिनीहरूलाई सोध, आकाशहरू तथा धर्तीका पालनकर्ता को हुन् ? भनिदेऊ– ‘अल्लाह !’ अनि तिनीहरूलाई भन– “तिमीहरूले उनलाई छोडी यस्ता चिजहरूलाई किन आफ्नो संरक्षक–मित्र बनाएका छौ जसलाई स्वयं आफ्नो लाभ तथा हानिको पनि सामथ्र्य छैन ?” सोध– “के दृष्टिविहीन र देख्न सक्ने (व्यक्ति) समान हुन सक्छ ? के अन्धकारहरू तथा प्रकाश समान हुन सक्छन् ?” के तिनीहरूले ठहराएका समकक्षीहरूले पनि अल्लाहले भैंm कुनै सृष्टि गरेका छन् अनि तिनीहरूलाई सृष्टिहरूबीच फरक गर्न गा¥हो भएको छ ?” भनिदेऊ– “प्रत्येक चिजका स्रष्टा अल्लाह नै हुन् । उनी एकमात्र छन् अनि प्रभुत्वशाली छन् ।” (कुरआन १३ः१६)
“र अल्लाह भन्दछन्,“दुईवटा उपास्य नबनाऊ । वास्तवमा त्यो उपास्य एउटै छ र केवल म (अल्लाह) सित भय राख ।” (कुरआन १६ः५१)
“हे ! मुहम्मद (स.) भनिदेऊ,“म तिमीहरु जस्तै एउटा मनुष्य मात्र हुँ । मतर्फ प्रकाशना आउँछ कि तिमीहरु सबैका पूज्य एकमात्र छन् । अतः जो कोही आफ्ना रब सित भेटको आशा राख्दछ उसले सत्कर्म गर्नु पर्दछ । र आफ्ना रबको उपासनामा कसैलाई साझेदार बनाउनु हुँदैन । (कुरआन १८ः११०)
यी सबै आयत र यसबाहेक कुरआनमा अरु कतिपय उदाहरणहरु छन् जुन यस कुराको पुष्टि गर्छ कि ईश्वर एउटा मात्र छन् । जुन मानिसले आस्था र कृयाकलाप दुबै त्यही सत्य ईश्वर अल्लाहमा निर्धारित भएर गर्छ त्यो नै मुस्लिम हो ।
مدعو کو دعوت دینے کی ترتیب